Indonesia in Focus: Waa in ay jiraan daawo ah cudurka kasta.
Waa in ay jiraan daawo ah cudurka kasta.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (356)
(Qaybta saddex boqol iyo konton lix), Depok, West Java, Indonnesia, August 24, 2015, 18:56 pm).
Waa in daawo loogu talogalay cudurka kasta, ayaa sheegay in Muhammad Nabiga in uu ku hadlaysaan. Dhakhaatiirta ayaa caadi ahaan bixiya daaweynta ama kiimiko qoro daawooyin sida kaabsalka ama kaniiniyo caplets, halka dhir ah oo sida caadiga ah kuu qori dhalatada (dhalatada).
Marka dhakhaatiirta isticmaalaan habka cilmiga ah ee daaweynta, halka dhir ah (dhakhtar) oo isticmaalaya taaban karo hababka, laakiin dhammaan model ee kor ku xusan waa dadaal (dadaal) sidii nin oo looga baahan yahay Ilaah, laakiin daawo finalka la goostay ayaa la idanka Eebe. Qofna ma bogsiin karo cudurka iyada oo aan oggolaansho iyo doonistii Ilaah inkastoo uu daweeyey dhakhtar / dhakhtar ama isbitaal ee ugu horumarsan iyo ugu qaalisan.
Cudurka A ayaa loo magacaabay kitaabkii:
Ilaah go'aamiso cudurka aadanaha isticmaalayo sayniska Ilaah (sunatullah), sababta iyo saamaynta.
Tusaale ahaan aragnimada Mr. Supri, kuwaas oo soo gaaray kelyaha, ay sabab u sii yaraanayo kelyaha (toobinta), ay sabab u tahay inuu caado ah ee la cabbo soda.
Marka weli askari oo waxay u adeegeen in Natuna Island, maxaa yeelay labaatan sano ka hor ma qalabka biyaha lagu nadiifiyo la qaadi karo, iyo ceelasha biyaha jasiiradda of Natuna daruur oo kale ah.
Jasiiradda Natuna ku dhow inay Singapore, sidaas darteed si fudud Mr. Supri iibsan soda kala duwan ee gasacadaha, si cuni subaxdii, duhurkii, iyo habeenkii uu cabbi jiray soda.
Caadooyinka waxay keeni in ay waxyeeleeyaan kelyaha, si Mr. Supri waa mari dialysis (dialysis hemo) 17 sano, iyo laba bilood ka hor Mr. Supri ugu dambeyntii yeedho Eebe (dhintay).
Kuwa ay saameeyeen cudurka kelyaha, inta badan hadda oo kaliya loo yaqaan laba therapy, koowaad ee daaweynta la xubin kelyaha, labada dialysis (dialysis hemo), in dialysis waxaa 3 sano ee lasoo dhaafay, waxaa jira ilaa 20 sano ku adkaystaan, ama ilaa 17 sano sida Pak Supri,
Intaa waxaa dheer in ay caado ka soda la cabbo, kelyaha waxaa inta badan sababa sabab u ah cudurka sonkorowga, dhiig karka, cabbitaanka khamriga (biir / khamri), qaadashada dawooyinka bilaa warqad, sida tonic / tonic / Qeybaha daroogada awood leh in ka badan xuduudda, iyo sidoo kale sababta cudurrada kale.
ERAYADA EE DAAWAYNTA awood
Ilaah u mahadnaq, salaadda iyo salaanta laga yaabaa in had iyo jeer lagu wareejiyey Nabi Muxammed, qoyskiisa iyo saaxiibadii.
Mar marka Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri.
"Waa aan Ilaah wuxuu soo diri hoos cudur, laakiin waxa uu hoos u daawada, waxaa la ogsoon yahay kuwa yaa garan oo aan hore u aqoonu ay dadka aan aqaano" 
Si daaweynta wax ku ool ah oo ka soo natiijada, waa in aynu ka fiirsada qaar ka mid ah shuruudaha. Oo ka dib markii aan ku qeexi doonaa laba shuruudaha ugu waaweyn ee daaweynta wax ku ool ah.
ERAYADA HORE: dawayn sax ah
Si daroogo aad isticmaasho waa run ahaantii waxtar leh iyo efficacious, si aad cudur daaweyn, waxaad leedahay daaweynta saxda ah.
• Kaliya marka ogaanshaha cudur aad u xanuunsan
• Kaliya dooro daawada
• qiyaasood oo ku haboon daroogada
• Isticmaalka waqtiyeysan
• Xaqa fogaada xayiraad kala duwan iyo waxyaabo kale oo in la xakameeyo tallaabo ah ee daroogada.
Haddii aad khalad samayso mid ka mid ah waxyaabaha kuwii waxa aad u suurto gal ah in aad sameyn daaweynta aan ku soo dejin doonaa natiijada, sida la filayo.
Kuwaasi waa qaar ka mid ah casharada aan ka baran karno Xadiiska Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii soo socota.
"Laga soo bilaabo Saaxiibka Jabir Radi anhu, ka Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii, ayuu yiri," cudur kasta oo daawo ah, iyo marka aad hesho daawada saxda ah cudur, shaki la'aan bogsanaysaa la izzin Alle "[warbixiyay by Muslim]
Qayim Ibn rahimahullah, faalloonaya xadiiska adigoo yidhaahda, "In Xadiiska Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii Isagoo caafimaad associate ah oo sax ah (kulanka) daroogada cudurka. Sidaa darteed, ma jiro mid ka mid makhlukpun laakiin uu soo horjeeda. Iyo cudur walba dhab ahaan waxa uu noqday daroogada ah daawo, oo cudurka loo daaweeyaa. Sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii Isagoo caafimaad associate Nebigu si sax ah ula daawaynta. Saxnaanta Tani waa ka badan oo kaliya joogitaanka ama maqnaanshaha daroogada (u ah cudurka, qalinka) sababta oo ah cudur haddii ay daroogada ka badan heerka cudurka, labadaba habka isticmaalka ama qiyaasta waa in loo badalaa galay cudur cusub. Marka habka isticmaalka ama qiyaas ka yar loo baahan yahay, ma awoodi doonaan in ay la dagaalamaan cudurka, si bogsiinta kuma qummanayn. Marka dhakhtar ee doorashada daroogada qaldan, ama daroogada oo uusan u isticmaalaa bartilmaameed sax ah, ka dibna daawo ah ma aha 'xaq u leeyihiin inay yimaadaan. Marka daaweynta waxaa lagu sameeyaa ma aha xaq u leh daawada, daroogada daruuri ma noqon doonto mid waxtar leh. Haddii jidhka oo qofka bukaanka ah ma u dhigma daroogada ama aan jidh ahaan awoodin in ay helaan daawada ama wax xanibaado taaso tallaabada daroogada, ma daawo shaki ku yimid. All in sababta oo ah qalad in daaweynta. Haddii daawaynta ku habboon dhammaan dhinacyada ay, sida xaqiiqada ah la idanka Eebe, soo kabashada waxaa laga heli doonaa. Waa kan waxaas fasirkiisii ​​ugu wanaagsan ee xadiiska kor ku xusan. 
Rahimahullah Ibn Xajar al-Asqalani sheegay in Ibn al-Qayyim habayn erayo, "In xadiiska ee Jabir Ehelu Radi anhu taariikhda waxaa ku Sugan Calaamad in bogsiinta ay ku xiran tahay saxnimada iyo idanka Eebe. Saas waxaa ugu wacan daroogada ah mararka qaarkood waa sidoo xadka ee habka isticmaalka ama dose ka shisheeya, si ay daroogada waa waxtar lahayn, waxaa xitaa macquul ah in daawadu ay si dhab ah u keeni cudurada cusub. 
ERAYADA LABAAD: fasaxaya ahu
Sida Muslim ah waa in aad ku kalsoonahay aayaha Ilaah. Waad rumaysan tahay in wax walba oo adduunka ay taasi dhacdo ay doonista iyo qodobada imtithaal.
"Waxaan ku abuuray wax walba sida uu aayaha (siinta)" [Al-Qomar: 49]
Markaasaa nebigii u soo sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri.
"Wax kasta (dhacaya) on qaddar (iyo qodobada doonista), si ay u dareemaan wax caajis iyo hamiday (dhacaya on aayahooda)" [warbixiyay by Muslim]
Doonista Ilaah iyo qodobo ka mid ah waxa uu daboolayaa wax walba, waa cudur laga reebo iyo daawo ku jirin in dhib aadanuhu. Sidaa darteed, Nebi Ibraahim Alaihissallam ayaa sheegay in sida Qisadii Quraanka.
"Oo markii aan xannuunsanayo, ka dibna uu yahay daawo". [Ash-Shu'ara: 80]
Hore Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii marka uu jiro xubin qoyska ka mid ah xanuun, ama marka ay wajahayaan qofka jirran, wuxuu ku tirtiri gacanta midig, isagoo tukanaya.
"Ya Eebe, Sayidka aadmiga oo dhan, cabashooyinka sirnakanlah, bogsiiyaan kuwa isaga, intaad nuxurka ee Bogsiinta, bogsan waynay laakiin bogsiin bogsiintaaduna in ka tago cudurka jirin" [alaih Bukhaari]
Sidaa darteed, xadiiska ee Jabir Radi kor ku anhu, marka laga soo tago in gargaarka lagu xiro sax ah ee daaweynta, Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii sidoo kale waxa ay la xidhiidhaan doonista Ilaah.
"Marka aad ka helay daroogada saxda ah cudur, shaki la'aan waa la daaweyn doonaa idanka Eebe Ilaaha Qaadirka ah".
Ibn Abd al-Barr rahimahullah yiri, "Oo erayadii Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii.
"Daawooyinka hoos jira (nuxurka), taas oo hoos u cudur" 
Waxaa jira qawl ah (taas oo uu sharaxayaa) in daawo, qofna ma aysan awoodin in ay ka dedejisan xaggiisa uu yimid, oo cidna cid og markii uu yimid. Sida runta ah waan soo joognay inta badan dhakhtarka (dhakhtar) oo isku dayay in lagu daweeyo laba qof oo uu arkaa in ay dhibaato ay ka cudur la mid ah. Labaduba waa cudur overwritten waqti isku mid ah, isku da ', oo laga keenay dalka ka mid ah, xitaa mararka qaar ay laba walaalo ah oo mataano yihiin, oo ay cuntadiisuna waxay ahayd isku mid. Sidaa darteed, dhakhtarka kula dhaqmaya si daroogada isku mid ah. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah soo kabsaday, halka qaar kalena xitaa dhimasho ama xanuun sii dheerayn doono. Ninka labaad ayaa dhawaan soo noolaaday, sidaas dheer ka dib, in ay ahayd markii in Ilaah ku talo jiro inuu ka soo kabsado ". 
Ibn Xajar Al-Asqalani rahimahullah yiri, "Waxaa ka mid ah casharada ku jira erayada Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii.
"Daroogada ayaa waxaa la ogsoon yahay kuwa wax yaqaanna iyo lama yaqaan dad ma aqaan"
(Waxaa ka mid ah casharada kuwa yahay) waxa loo soo maray oo ay bukaanka ugu badan. Waxa uu daaweynta cudur daroogada, ka dibna uu ka soo kabsaday. Markaas mararkii hore oo kale uu ku dhuftay cudur la mid ah, oo waxaa lagu daaweeyaa daawo la mid ah, laakiin daroogada ma ahayn wax ku ool ah. Sababta oo ah noocan oo kale ah wax kama (Jaahil ah) ee ku saabsan dabeecada qayb ka mid ah daroogada. Waxaa laga yaabaa in ay jiraan laba cudurada la mid yihiin, halka mid ka mid ah wuxuu ka kooban yahay dhowr ah sababaha (cudurada / dhibaatooyin), sidaas darteed waa in aan la daaweyn karaa daawooyin kuwaasoo hubaashii ku ool ah ee lagu daweeyo cudurada aan ahayn dhibaatooyinka, taasina been qalad ah. Oo marmarna labada cudurada la mid yihiin, laakiin Ilaah doonayo in la bogsiiyo aan, ka dibna daroogada waxay ahayd natiijo la'aan, iyo in marka dhakhaatiirtu ay burburtay weyneeyaan (dhakhtarka). 
Ku buriyaan dambiile ah sharaxaad ku xusan ama fahamka dadka intooda badan in marka kiis ayaa lagu dhawaaqey sida daawo loogu talogalay cudurka ah, sida xaqiiqada ah efficacious iyo cudurka waa in baaba'aan. Ama, haddii tallaalka cudurka ayaa kadib la siiyaa caruurteena xaqiiqa ahaan difaaca iyo in laga ilaaliyo cudurka. Toosa O, walaalkiis, aan aan sameeyo oo dhan oo aan doondoono Ilaaha ah halka keliya ee dadaalka xaddidan yihiin muhim ka dhigay. Hadda ka hor sheegay.
"Haddii qaddar ayaa markaas soo joogsan doonaa miyir"
Taasi waa, haddii Ilaah ku talo jiro cudur ku dhacdo qof, ama marka Geeridu u yimid, dadaalada kala duwan oo ka dhigtay in ay ka fogaadaan dadkuba, ma tihid mid waxtar leh, iyo doonistii Ilaah waa maxay waa dhacay. Aqidah oo aaminsan tani waa in aynaan hilmaamin in mar kasta waxaan nahay, oo wax alla wixii aynu qiranno. La xiriirta daaweynta in aynu adkaysanno cudur kasta, waxaa lagu soo koobi karaa in qodobbada soo socda.
1. ma waxaanu u rumayn, in cudurku wuxuu ahaa Ilaah kan Abuuray, iyo kuwa go'aaminaya in cudurka inoogu dhacday waa Ilaah. Ma u baahan tahay ka caban, waxa aanu kaa aqbali wax walba dhaafa. Ee rumee in cudurka waa in lagu kaydiyaa ka dambeeya kumanyaalka reer casharada. Sidaas, wax kasta oo aan lahaa si dabiici ah oo wanaagsan oo inagu saabsan, ama aduunka ama aakhiro.
"Waxa la yaab leh sida arrimaha Mu'min ah, dhab ahaantii dhammaan arrimaha ay si fiican, oo aan la iska leh, laakiin kuwa rumaysta. Markii uu ku dhuftay ahaanshaha, uu aad ugu mahdinayo, ka dibna waxa uu noqonayaa mid raaxo ah isaga. Oo intuu dhibaataysnaa ayuu ahaa bukaanka, ka dibna dhibaatada ku waa isaga u wanaagsan tahay "[warbixiyay by Muslim]
2. Waxa soo socda aannu samayn lahayn waa in la Caabudi bogsiinta inay Ilaah, koraan iimaanka iyo xukun kii Ilaah keliya cudurradeenniina bogsiin kara. Sidaa darteed, Nabiga Shallallahui ah 'wa calaa aalihii Maxamed NNKH uu dadka salaadda baray
"Ya Eebe, Sayidka aadmiga oo dhan, cabashooyinka sirnakanlah, bogsiiyaan kuwa isaga, halka aad tahay Daaweeyaha, bogsan melainan bogsiinta bogsiintaaduna in ka tago cudurka lahayn"
Inta badan waxaan this illoobin. Dhab ahaantii, inta badan jeer noqon salaadda ee la soo dhaafay in aannu ku samayn lahayn in dadaalka dib u soo kabashada, ama si fudud aan sameeyo marka ay shaqaalaha caafimaadka lahaa dhibaato, ama aanu lacag aad u badan ayaa ku dagay waxay ku quusasho badan oo wadnaha uu shaki ka buuxo -Allah too- noo berdo la 'A bogsiin inay Ilaah, oo wuxuu ku yidhi, "Bal yaa og annagoo baryadayada siiyey". Subhanallah, iyadoo shaqaalaha caafimaadka ay ku niyadsan yihiin, laakiin waxaan shaki xoogga Ilaah, oo sidaas daraaddeed annaguna waxaannu kugu nidhi, "Bal yaa og annagoo baryadayada siiyo"?
[Guuriyeen ka majaladda Al-Furqan, Issue 08, Year 10 / Awwal 1432 (February - 2011. Waxaa daabacay Faafinta Ma'had Lajnah Al-Furqan Al-Islami, Cinwaanka: Ma'had Al-Furqan, Srowo Sidayu Gresik Bariga Java]